Guriga Iskuulka - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Xarunta Diiwaangelinta Dugsiyada ee Robbinsdale Area waxay taageertaa qoysaska go'aansada in iskuulka lagu dhigto ay tahay doorashada ugu fiican ee ardaydooda. Dugsiyadu waa inay u hoggaansamaan shuruudaha gobolka iyadoo la raacayo Sharciga Wax Barashada Waajibka ah ee Minnesota .
Ardayda guryaha lagu tababarayo ee cusub ayaa isqori kara wakhti kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Si aad isuqorto fadlan soo gudbi Foomka Diiwaangelinta Hore ee Dugsiyada aan la aqoonsan. Haddii aad qorsheyneyso inaad sii wadato waxbarashadda guri-sannadeedka soo socda, Warqad Ujeeddadeed oo ah Sii wadista Bixinta Waxbarista waa in loo gudbiyaa xafiiskayaga oo tilmaamaya ujeeddadaada ah inaad sii wadato waxbarashada guriga iyo haddii wax isbeddel ah la sameeyay (tusaale, isbeddelka xulashada imtixaanka, diiwaanka tallaalka ee la cusbooneysiiyay, isbeddel cinwaanka).
Marka la gaaro Oktoobar 1, degmo dugsiyeedka deegaanka waa inay lahaataa mid ka mid ah foomamka hoose ee faylka ku jira ee loogu talagalay arday kasta oo guri lagu dhiganayo. In ka badan hal arday ayaa lagu qori karaa foomamkan.
Foomka Diiwaangelinta bilowga ah ee Dugsiyada aan la aqoonsan
Warqad Ujeeddo ah in lagu sii wado bixinta Tilmaamaha
Codsiga Gargaarka iyo Magdhawga
Ardayda iskuulka dhigata waxay xaq u leeyihiin inay helaan xoogaa gargaar gobol ah. Qaddar go'an ayaa loo qoondeeyay sannad kasta Waaxda Waxbarashada ee Minnesota . Si aad xaq ugu yeelatid magdhowga (sida lacag celinta buugaagta, adeegyada caafimaadka ama adeegyada la-talinta), waa inaad buuxisaa foomka ED-01650-33 oo aad ugu celisaa Xarunta Diiwaangelinta ee degmada ugu dambayn Oktoobar 1 sannad kasta. Waxaa muhiim ah inaad gasho tirada ardayda guri-guri loogu dhigayo ee aad doonaysid inaad ka hesho adeegyada sanduuqyada cinwaankeedu yahay Buugaagta Buugaagta, Adeegyada Caafimaadka iyo Tilmaanta / La-talinta .
Haddii ardaygaagu ku jiro fasallada 7 illaa 12, waxaad la tashan kartaa waaxda hagidda ee dugsiga xaafaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan imtixaannada xirfadaha aasaasiga ah, dhibcaha iyo shuruudaha qalin-jabinta.
Rasiidhada alaabooyinka u-qalma waa in la soo gudbiyaa ugu dambayn 15-ka Maajo iyadoo la dhammaystirayo foomka soo-celinta xagga hoose. Fadlan ku qor hal arday oo keliya foomkiiba. Waxaad heli doontaa laga bilaabo Julaay 1, 2020 ilaa May 15, 2021 inaad soo iibsato qalabka qoraalka oo aad soo gudbiso codsi lacag celin ah. Kaliya risiidhada alaabada la soo dhigay waa la aqbali karaa, waxay u baahan yihiin inay ku jiraan cadeyn ku filan oo ah lacag bixinta waana in la taariikheeyaa inta udhaxeysa Julaay 1, 2020 & May 15, 2021. Ha isticmaalin foomkan hadaadan TAHAY inaad danaynayso kaqeybgalka foomka ED-01650-32 gargaarka gobolka.
Soo-jeedinno ku saabsan waxa u-qalma mag-dhawga: ujrada imtixaanka hagidda ee heerka guud ee looga baahan yahay qaran ahaan looga baahan yahay ardaygaaga. Hubso inaad kudarto rasiid khidmadda imtixaanka ah. Qoraallada ardaygu waa inay ahaadaan kuwa cilmaani ah, dhexdhexaad ah, aan fiidiyoow ahayn, oo aan awood u lahayn in loo leexiyo adeegsiga diinta. Sida loogu adeegsaday dareenkan, cilmaaniyadda, dhexdhexaadnimada iyo fiidiyowga waxaa loola jeedaa waxyaabaha noocaas ah looma tixgelin doono inay yihiin diimeed, ruuxi ah ama muqaddas ah, nuxur ahaan iyo qaab ahaanba, waxaana loo tixgelin doonaa inay soo bandhigaan dhacdooyin, xaqiiqooyin, iyo aragtiyo khuseeya diinta ama caqiidada diimeed ee eex la'aan.
Haddii aadan hubin in waxyaabaha qaarkood ay u qalmi doonaan, fadlan soo wac 763-504-8065.
Codsiga Magdhawga ee Qalabka Qoraalka Iskuulka
Qoysaska iskuulku waa inay u hoggaansamaan sharciyada tallaalka gobolka ee muhiimka ah ee la xiriira ilaalinta caafimaadka bulshada. Xeerarka Minnesota, Qaybta 121A.15, waxay u baahan tahay in waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah ay u soo gudbiyaan bayaanka tallaalka Minnesota ama bayaan nootaayo ah oo la xiriira aaminaadda damiir ahaan ee degmo dugsiyeedka ay deggan yihiin.
Sannad kasta waxqabadka arday kasta oo aan ka diiwaangashanayn dugsiga dadweynaha waa in lagu qiimeeyaa iyadoo la adeegsanayo imtixaan lagu gaarayo heer qaran oo caadi ahaan loo tixraaco. Kormeeraha guud ee degmada uu ardaygu wax ku barto iyo qofka mas'uulka ka ah waxbarista ardayga waa inay ka heshiiyaan imtixaanka gaarka ah ee la adeegsan doono, iyo sidoo kale maamulka iyo goobta imtixaanka. Qoysaska qaarkood waxay doortaan inay isticmaalaan Barnaamijka Imtixaanka Gobolka Minnesota (MSTP). Boggan, waxaad ka heli doontaa foom dalab ah oo loogu talagalay imtixaannada, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan barnaamijka imtixaanka.
Sharciga Shaqsiyaadka Naafada ah ee Waxbarshada (IDEA) wuxuu ubaahanyahay in degmooyinka iskuulada dowliga ah ay ogeysiiyaan oo siiyaan macluumaad qaas ah wakiilada caruurta dhigata iskuulada aan dowliga aheyn.
Shuruucda federaalka iyo gobolka ayaa uga baahan degmo dugsiyeedyada inay qabtaan howlo lagu ogaanayo, lagu aqoonsanayo laguna qiimeynayo dhammaan carruurta naafada ah ee ku sugan xuduudaha juqraafi ee degmada. Waxqabadyadan waxaa loo yaqaan habka "Helitaanka Ilmaha". Shuruudaha Child Find ayaa khuseeya dhammaan carruurta naafada ah oo ay ku jiraan carruurta dhigata dugsiyada aan dawliga ahayn.
Haddii aad wax walaac ah ka qabto horumarka ardaygaaga ama aad rabto inaad ka sii hadasho Waxbarashada Gaarka ah, fadlan kala xiriir xafiiska xafiiska waxbarashada gaarka ah lambarkan 763-504-8600.
Haddii ilmahaagu hore uga diiwaangashan yahay mid ka mid ah dugsiyadeena degmada, oo hadda guryo laga siin doono, fadlan ku wargeli dugsiga ka-noqoshadiisa / iyada. Haddii aad ilmahaaga dib ugu diiwaangeliso dugsiga, fadlan ku wargeli shaqaalaha Isqorista lambarka 763-504-8065 inaadan mar dambe ku sii soconaynin waxbarashada guriga.
Su'aalaha iyo Jawaabaha Dugsiga Hoose
Warbixin ka socota Waaxda Waxbarashada ee Minnesota
U hogaansanaanta Sharciga Iskuulka
Su'aalaha ku saabsan Kheyraadka Dheeraadka ah
Su'aalo Dheeraad ah
Waxaan ka fikirayaa inaan cunugeyga wax ku barto guriga. Halkee ayaan ka bilaabayaa?
Marka hore, cilmi baaris si loo helo fahamka iskuulka-guriga iyo waxa ku lug leh. Wax-ku-barashada guriga-guriga ee Minnesota waxaa hoos imanaya qawaaniinta edbinta khasabka ah, Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22 , iyo qawaaniinta la xiriira . Baadh falsafadaha kala duwan, manhajka, farsamooyinka iyo ururada u ah ilaha iskuulada guriga. Waxaad ka hubin kartaa boggaga internetka ee ururada maxalliga ah iyo kuwa gobolka ee wax lagu barto guryeynta wixii taageero ah iyo ilaha laga heli karo.
Ardayda Minnesota ma looga baahan yahay inay dugsiga dhigtaan?
Sharciga edbinta khasabka ah ee Minnesota ayaa u baahan dhammaan carruurta da'doodu tahay 7-17 inay dhigtaan iskuul dowladeed ama mid aan dawli ahayn (gaar loo leeyahay). Dugsiyada-guriga waxaa loo tixgeliyaa nooc ka mid ah kuwa aan dawliga ahayn sida uu dhigayo sharciga Minnesota. Sababtoo ah barashada khasabka ah iyo xaadiritaanka iskuulka waa qasab, waa inaad iska diiwaangelisaa dugsiga guriga. Ardayga da'diisu tahay 7-17 waa inuu ka diiwaangashan yahay dugsiga mana seegi karo dugsiga mooyee:
dugsiga guri wuxuu u hoggaansamayaa Xeerarka Minnesota, qaybaha 120A.22 iyo 120A. 24; ama,
waalidku wuxuu uqalmay ka cafinta sharciga ah ee sharciga ah ee waxbarida khasabka ah iyadoo la raacayo Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 12.
Bulshooyinka Amishku gebi ahaanba kama dhaafayaan qawaaniinta edbinta khasabka ah?
Maya, ardayda ka socota jaaliyadaha Amish gabi ahaanba kama dhaafayaan shuruudaha qasabka ah ee waxbarista ee Minnesota; si kastaba ha noqotee, waxay xaq u leeyihiin inay joojiyaan waxbarashada, ka warbixinta iyo imtixaanka fasalka sideedaad ka dib.
Waa maxay farqiga u dhexeeya guriga ka baxa iyo wax-barashada guriga?
Waxbarista guri-ku-dirirka waxaa loogu talagalay ardayda dhigata iskuullada dadweynaha ee waqtiga-buuxa ee qaba cudurrada ku koobnaada guriga. Haddii dhakhtar codsado oo ay degmadu oggolaato, macallin ayaa guriga u yimaada si joogto ah si uu ardayga ugu sii wado shaqada koorsada caadiga ah ee dawladda illaa uu ardaygu kafiicnaanayo inuu ku laabto dugsiga. Guri-ku-dhigashada waa iskuul gaar loo leeyahay oo guriga ka socda.
Waa maxay farqiga u dhexeeya barashada tooska ah ee tooska ah ee dadweynaha iyo iskuulka-guriga ee Minnesota?
Barashada khadka tooska ah intabadan waxaa loola jeedaa nooc ka mid ah waxbarashada dadweynaha oo ka dhacda guriga, badiyaaana ay ku lug leeyihiin waalidka / ilaaliyaha. Ikhtiyaarkan wuxuu bixiyaa manhajka iskuulada dadweynaha ee bilaashka ah, imtixaanada loo igmaday iskuulada dawlada, tilmaam toos ah iyo kormeerid ay sameeyaan macalimiinta shatiga leh ee dugsiyada dadweynaha ee gobolka Minnesota. Dhameystirka barnaamijyada barashada tooska ah ee dadweynaha waxay keeneysaa dibloomada dugsiga dadweynaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo bogga internetka ee Bixiyeyaasha Waxbarshada ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).
Barashada qadka tooska ah ee loo maro iskuulka internetka ee uu gobolku ogolaaday waa ikhtiyaar iskuul dowladeed, maahan ikhtiyaar waxbarasho oo aan dawli ahayn oo guri-iskuul ah. Ardayga ama qoysku waxay dooran karaan bixiye khadka tooska ah ee gobolku ansixiyay oo ay doorteen isla markaana si toos ah ula qoro iyaga. Markii lagu qoro barnaamijka khadka tooska ah iyada oo loo marayo mid ka mid ah nidaamyadan ardayga waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay arday dhigta dugsiga dadweynaha, oo aan loo dhigin arday guri-iskuul ah.
Sharciga Minnesota uma ogola ardayda dugsiga-guriga dhigata inay marin u helaan barashada qadka tooska ah iyada oo loo marayo sharciga waqtiga wadaag ee gobolka. Si kastaba ha noqotee, ardayda dugsiga-guriga ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay marin u helaan fursadaha barashada tooska ah ee tooska ah iyagoo siinaya waxbarista bixiyeyaasha waxbarashada khadka tooska ah ee dawladdu oggolaatay.
Barnaamijyada barashada tooska ah ee khaaska ah ayaa sidoo kale jira halka waalidku ay ku bixiyaan waxbarashada; guud ahaan, waalidiintu waxay u isticmaalayaan barnaamijka manhajka iskuulka lagu dhigto. Si kastaba ha noqotee, xulashooyinka waxbarashada tooska ah ee internetka qaarkood ayaa ah iskuulo ka diiwaangashan degmada dugsiga degmada isla markaana fuliya dhammaan howlaha kale ee leben dhaqameed iyo iskuul aan dawli ahayn uu sameeyo.
Go'aan baan ku gaadhay guriga-iskuulka. Hadda waa maxay?
Waa inaad ku wargalisaa kormeeraha guud ee degmada iskuulka degmadaada ujeedadaada ah iskuulka-gurigaaga ardaydaada (ardaydaada). Waxaad isticmaali kartaa foomka cinwaankiisu yahay Foomka Diiwaangelinta Bilowga ah ee Dugsiyada aan Dowliga ahayn ee aan Aqoonsiga lahayn oo ay ku jiraan Guryo-Iskuullo ay soo diyaarisay MDE, ama waxaad ku soo wargelin kartaa isla macluumaadka qaab kale. Kadib sanadka ugu horeeya ee iskuulka-wax lagu barto, waa inaad ku cusboonaysiisaa kormeeraha guud ee ku saabsan xaalada dugsiga gurigaaga adigoo u sii marinaya Warqad Ujeedada ah inuu sii wado bixinta cashar bixinta .
Goorma ayaan u diiwaangeliyaa iskuulkayga gurigayga degmadayda maxalliga ah?
Waalidiinta guriga-dugsiga dhigta waa inay ogeysiiyaan kormeeraha guud ee degmo dugsiyeedka ardayga deggan:
Marka la gaaro Oktoobar 1 ee sanadka ugu horeeya cunugga waxaa lagu bartaa guriga kadib markuu gaaro da'da 7;
Muddo 15 maalmood gudahood ah markii cunugga lagala baxayo dugsiga dadweynaha loona geeyo iskuulka guriga ama lagu qoro cunugga dugsi kasta oo aan dawli ahayn oo aan aqoonsanayn hay'ad aqoonsi oo gobolku aqoonsan yahay ( Liiska Hay'adaha Aqoonsiga Gobolku Aqoonsado );
15 maalmood gudahood markii laga guuro degmada deggan; iyo,
Marka la gaaro Oktoobar 1, ka dib markii la dhiso degmo cusub oo deggen.
Sideen ugu diiwaangeliyaa iskuulkayga gurigayga degmadayda maxalliga ah?
Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay bixisaa dukumeenti, Foomka Diiwaangelinta Bilowga ah ee Dugsiyada aan Dowliga ahayn ee aan la aqoonsan oo ay ku jiraan Guryaha-Dugsiyada, Waalidiintu ay u isticmaali karaan inay iskuulada gurigooda uga diiwaangeliyaan degmadooda. Waalidiintu sidoo kale way isdiiwaangalin karaan iyagoo adeegsanaya qaab elektiroonig ah ama qaab ku saleysan websaydh ah oo degmadu isticmaasho, ama ku soo wargaliso macluumaadka qaab kale. Ururada waxbarashada guriga waxay sidoo kale siiyaan qoysaska foomamka ay isticmaali karaan. Macluumaadka la siiyay kormeeraha guud waa inuu ku jiraa:
magaca ilmaha, taariikhda dhalashada, iyo cinwaanka
magaca macallin kasta iyo caddaynta in bare kastaa buuxiyo shuruudaha Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 10
imtixaannada sanadlaha ah ee dugsigu ugu talo galay inuu isticmaalo, maamulka iyo goobta baaritaanka, haddii loo baahdo, iyadoo la raacayo Xeerarka Minnesota, qaybta120A.22, hoosaadka 11 ; iyo,
hadalada sida looga baahan yahay Xeerarka Minnesota, qaybta 121A.15, hoosaadka 8 , ee ku saabsan talaalada caruurta ee loo baahan yahay.
Ardaygaygu wuxuu ka diiwaangashan yahay iskuul buuxa oo waxbarashada tooska ah ee tooska ah ee tooska ah loo ilaaliyo qoraalka, shaqooyinka fasalka, iyo arrimaha dibloomada. Ma u baahanahay inaan iskudiiwaangaliyo sidii layli guri-guri?
Dugsiyada barashada tooska ah ee tooska ah ee tooska loo leeyahay (ee ka soo horjeedda manhajka tooska ah ee tooska ah oo keliya ama barnaamijka waxbarashada tooska ah ee dawladda ee dawladdu oggolaatay), waxay leeyihiin mas'uuliyadda inay ku soo wargeliyaan isqorista ardaygaaga kormeeraha dugsiga xaafadda ugu dambayn Oktoobar 1 sannad kasta. Sidoo kale, iyaga, adiga maahan, shuruud ah inay la heshiiyaan kormeeraha kormeerka imtixaan heer qaran ah oo heer qaran ah haddii iskuulku uusan aqoonsanayn hay'ad aqoonsi-aqoonsi oo gobolku aqoonsan yahay.
Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharciga Tallaalka Minnesota, oo ay ku jiraan foomamku?
Macluumaadka ku saabsan sharciga tallaalka, Xeerarka Minnesota, qaybta 121A.15, hoosaadka 8, waxaa laga heli karaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota . Foomamka waxaa laga heli karaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota .
Ma noqon karaan waalid-hooyooyin ama ayeeyooyin awoowayaasha ah guriga-iskuulka xubnahooda?
Qofka siinaya edbinta cunug waa inuu buuxiyaa ugu yaraan mid ka mid ah shuruudaha soo socda per Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 10:
Macallinku wuxuu haystaa ruqsad waxbaris Minnesota oo ansax ah oo ku saabsan berrinka iyo heerka fasal ee la baray. (Ku lifaaq nuqul ka mid ah liisanka.)
Macallinka waxaa si toos ah u kormeeraya qof haysta ruqsad Minnesota oo ansax ah.
Macallinku wuxuu si guul leh u dhammaystiray imtixaanka kartida macallinka. Fadlan laxiriir Gudiga Ruqsad Siinta iyo Heerarka Aqoonyahan Aqoonyahan (PELSB) wixii macluumaad dheeri ah.
Macallinku wuxuu haystaa shahaadada jaamacadeed.
Macallinku waa waalidka, ilaaliyaha ama qofka kale ee haysta haynta sharci ee cunug kaas oo lagu qiimeeyo iyadoo loo raacayo habraacyada Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 11 .
Guud ahaan, tani waxay ka dhigan tahay inay u baahan yihiin inay haystaan shahaado bachelor ah oo afar sano ah. Xaaladaha halka aysan arintu sidan ahayn, mid ayaa laga yaabaa inuu tixgeliyo isqorista barnaamijka barashada internetka ee Gobolku ogolaaday. Barnaamijyadan ayaa ah iskuulada dawlada ee u ogolaanaya ardaygu inuu wax ku barto guriga iyadoo ay la socdaan macalimiin haysta liisamada Minnesota halka waalidka ama awoowaha awoowaha u yihiin tababaraha waxbarashada.
Maadooyin noocee ah ayaa looga baahan yahay in lagu barto iskuulka guriga lagu qaato?
Ardayda da'doodu u dhaxayso 7-17, waxbarashadda, buugaagta wax lagu qoro iyo agabyada waa inay ahaadaan afka Ingiriiska. Luuqad kale ayaa loo isticmaali karaa iyadoo la raacayo Xeerarka Minnesota, qaybaha 124D.59 ku 124D.61. Tilmaamaha waa in lagu bixiyaa ugu yaraan maadooyinka soo socda:
xirfadaha isgaarsiinta aasaasiga ah oo ay ku jiraan akhriska iyo qoraalka, suugaanta iyo farshaxanka wanaagsan;
xisaabta iyo sayniska;
cilmiga bulshada oo ay kujiraan taariikhda, juquraafiga, dhaqaalaha, dowlada iyo muwaadinimada; iyo
caafimaadka iyo jimicsiga jirka.
Maxaan ubaahanahay inaan ka ogaado xulashada iyo helitaanka manhajka waxbarasho?
MDE kama caawineyso xulashada manhajka iskuulada aan dowliga aheyn, oo ay ku jiraan guryaha-iskuullada. Ardaygaagu waa inuu helaa waxbarid ku saabsan aqoonta iyo xirfadaha lagu faahfaahiyay sharciga waxbarista khasabka ah .
Waa maxay shuruudaha qiimaynta?
Waalidka aan buuxin shuruudaha Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 10, faqradaha (1-3) wuxuu u baahan yahay inuu ku qaado arday kasta oo da'diisu u dhaxayso 7-17 sano imtixaan la isku habeeyay oo caadi ahaan loo tixraaco. Imtixaanada, iyo borotokoolka lagu maamulo, waa in aad si isku mid ah uheshiisaan adiga iyo kormeeraha degmadaada. Intaas waxaa sii dheer, haddii qiimeynta la qiimeeyay, ee sida caadiga ah loo tixraaco aysan bixinaynin qiimeyn maaddo kasta oo looga baahan yahay Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 9 , waalidku waa inuu qiimeeyaa waxqabadka cunugga ee maadada khuseysa.
Xagee ka heli karaa imtixaan guud oo la tixraaco oo heer qaran ah?
Imtixaanada heer qaran ayaa lagu heli karaa dhowr siyaabood. Tusaalooyinka imtixaannada heerarka caadiga ah ee heer qaran loo tixraaco waxaa ka mid ah Imtixaanka Iowa ee Xirfadaha Aasaasiga ah (ITBS) ee fasallada K-8, Imtixaannada Iowa ee Horumarinta Waxbarashada (ITED) ee fasallada 9-12, Imtixaannada Stanford Achievement Tests (SAT-10) ee fasallada. K-12, Imtixaanka Kasbashada California (Terra Nova) iyo Peabody. Waalidiinta iskuulka guriga ku jira waxay ka dalban karaan imtixaanada Barnaamijka Imtixaanka ee Gobolka Minnesota . Imtixaannada waxaa sidoo kale laga heli karaa qaar ka mid ah ururada iskuulka-guriga iyo kuwa heer qaranba ah.
Maxaan ku sameeyaa natiijooyinka qiimeynta?
Dhammaan natiijooyinka qiimeynta iyo buundooyinka waa in lagu hayaa dokumentiyada guriga-dugsiga.
Ardaygaygu dhibco aad u hooseeya ayuu ka keenay imtixaanka caadiga ah ee sanadlaha ah. Maxaan ubaahanahay inaan sameeyo?
Waa inaad heshaa qiimeyn dheeri ah oo ku saabsan awooda ilmaha si aad u hubiso naafonimada waxbarasho ee suurtogalka ah. Haddii ilmahaagu wax dhaliyey boqolkiiba 30 ama ka hooseeya, ama hal heer fasal oo ka hooseeya heerka waxqabadka ee carruurta ay isku da'da yihiin, sharciga gobolku wuxuu u baahan yahay baaritaan dheeri ah sida uu qabo Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 11 (c) . Waxaa jira ururo badan oo dhameystiri doona qiimeynta noocan ah. Tixgeli inaad ka hubiso dhakhtarkaaga ama xafiiska waxbarashada gaarka ah ee degmada dugsiga deggen si aad wax uga qabanqaabiso.
Ma jiraan waxyaabo ka reeban shuruudaha imtixaanka caadiga ah ee qaran ahaan loo tixraaco sanadkiiba mar?
Guri-dugsiyeed la aqoonsan yahay ayaa ka reebban shuruudaha imtixaanka, sida ku xusan Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 11 (d) . Xaaladaha qaarkood, marka qofka bixinaya tilmaanta uu buuxiyo shuruudaha qaarkood, imtixaanka looga baahan yahay Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 11 (b) sidoo kale waa laga dhaafi doonaa.
Dugsigayga-guri ma la aqoonsan karaa?
Minnesota hadda waxay aqoonsan tahay hal hay'ad aqoonsi oo aqoonsi u siineysa aqbalidda iskuullada guryaha - Ururka Aqoonsiga Aqbaarta Ku-saleysan ee Minnesota (HBEAA). Waa ururka kaliya ee si guul leh ula kulmay una ilaaliyay heerarka ururada ee lagu aqoonsan karo.
Ka-dhaafitaannada imtixaanka ma u jiraan ardayda naafada ah?
Maya. Fadlan la shaqee maamulaha waxbarashada khaaska ah ee degmadaada degmo si aad u go'aamiso qiimeynta macnaha leh ee ilmaha naafada ah, sida loogu baahan yahay.
Waa maxay nooca dukumeentiyada aan ubaahanahay inaan ilaaliyo?
Dugsigu waa inuu ilaaliyaa dukumintiyada in dhammaan maaddooyinka loo baahan yahay la barayo, caddayn in qiimeynta loo baahan yahay la qabtay ugu yaraan sanadkiiba, iyo natiijooyinka qiimeyntaas. Dukumiintiyada waa inay kujiraan jadwalka fasalka, nuqulada agabyada loo isticmaalo waxbarista, iyo sharaxaada qaababka loo adeegsado in lagu qiimeeyo guusha ardayga, oo ay kujiraan buundooyinka imtixaanada caadiga-tixraaca ah ee lagu bixiyo hoosta Xeerarka Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 11. Dukumeentigan waa in la siiyaa dugsi kasta oo dawladeed halkaas oo ilmuhu jeclaan karo inuu isdiiwaangaliyo ka dib markii lagu qoray dugsiga guriga, si dugsiga ama degmadu u go'aamiyaan halka ilmaha la dhigayo iyo waxyaabaha koorsada looga baahan yahay ee ku habboon dibloomada dugsiga dadweynaha. . Dukumiintigan sidoo kale waa inuu uhelaa qareenka degmada kiisaska ku lug leh fulinta edbinta khasabka ah iyo warbixinta, maqnaanshaha ama badbaadada caruurta iyo meeleynta.
Degmooyinka iskuulada dadweynaha iyo ururada kale (kulleejooyinka, militariga ama shaqo-bixiyeyaasha mustaqbalka) waxay ubaahan karaan dukumiinti dheeri ah si loogu wareejiyo buundooyinka ama loo shaqaaleysiiyo arday iskuulka-guriga kujira. Waxay codsan karaan:
Diiwaanka diiwaanka guusha ardayga
Qoraal-hawleed shaqo oo ardaygu dhammeeyey
Liiska manhajka ama buugaagta
Maamulka imtixaanada iyo natiijooyinka qiimeynta
Wareysi lala yeesho ardayga
Shir lala yeelanayo macalinka guriga iyo / ama waalidka / ilaaliyaha.
Ardaygayga-iskuulka-guriga miyuu qalin-jabin karaa goor hore?
Ardayda dugsiga-guriga, iyo ardayda dhammaan hay'adaha aan dawliga ahayn, waa inay buuxiyaan shuruudaha qalin-jabinta ee uu dejiyey dugsiga-guriga ama hay'adda gaarka loo leeyahay. Guriga-guriga dhexdiisa, waalidiintu waxay dejiyaan shuruudaha qalin-jabinta ee dugsiga sare, iyo ardayga qalin-jabiya marka shuruudaha loo buuxiyo Xeerarka Minnesota, qaybta 120B.07 . Qawaaniinta edbinta khasabka ah ee Minnesota, ee looga baahan yahay ardayda inay ku jiraan dugsiga illaa ay ka gaarayaan 17, ayaa kaliya khuseeya ardayda aan wali qalin jabin.
Sidee wax looga qabtaa tabashooyinka ku saabsan dayacaadda waxbarashada, xadgudubyada imtixaanka guriga-dugsiga, ama kuwa kale ee aan u hoggaansamin barashada khasabka ah iyo ka warbixinta.
Adeegyada bani'aadamnimada ee degmadu waxay helaan oo ay wax ka qabtaan cabashooyinka dhammaan noocyada dayaca carruurta, oo ay ku jiraan dayacaadda waxbarashada.
Kormeerayaashu waxay leeyihiin waajibaad sharci ah inay kormeeraan xadgudubyada looga shakisan yahay waxbarista qasabka ah, baaritaanka iyo warbixinta, waxayna raadinayaan inay xaaladaha ku keenaan u hogaansanaanta sharciga gobolka. Haddii aysan awoodin inay si toos ah qoyska ula xalliyaan 15 maalmood gudahood, kormeeraha guud waa inuu ka codsadaa xaqiiqo raadin iyo adeegyo dhexdhexaadin ah guddoomiyaha waxbarashada ee Xeerarka Minnesota, qeybta 120A.26 . Haddii xadgudubyada la sheegay aan lagu saxin xaqiiqo raadin iyo dhexdhexaadin, kormeeraha guud waa inuu ku wargeliyaa qareenka degmada xadgudubyada la sheegay. Kormeeraha guud waa inuu sidoo kale ogeysiiyaa waalidiinta ujeedka inuu ogeysiiyo qareenka degmada. Qareenka degmada ayaa dacwad ku oogi kara xadgudubyada, iyo dacwad ciqaabeed ayaa la xareyn karaa.
Gargaarka gobolka ee la siinayo ilmahayga dugsiga dawliga ah toos ugu wareejin karaa dugsigayga gurigayga?
Iskuulada guryuhu xaq uma laha deeqda waxbarasho ee guud ee laga helo gobolka.
Waa maxay kharashyada la xiriira iskuulka-guriga?
Tusaalooyinka qaarkood ee kharashyada caadiga ah ee la xiriira iskuulka-guriga waxaa ka mid ah: buugaagta wax laga barto, manhajka, sahayda, khibradaha farshaxanka, iyo waxbarashada barnaamijyada ka baxsan awoodda waalidku u leeyahay inuu wax dhigo. Waalidka ayaa laga yaabaa inuu bixiyo kharashka barashada dheeraadka ah ee farshaxanka, si cunuggu uga qaybqaato kooxaha isboortiga ee ku saleysan bulshada, ama u yeesho waxbarasho khibrad leh iyo safarro shaqo. Imtixaannada sanadlaha ah ee loo baahan yahay ayaa sidoo kale ku kaca lacag.
Waxay qaadataa ballanqaad iyo maalgelin waqti si loo baro, loo xafido diiwaannada, iyo guud ahaan loo ilaaliyo waxbarashada ilmahaaga.
Ma jiraa taageero dhaqaale oo loogu talagalay manaahijta-iskuulka-guriga, qalabka, buugaagta wax lagu barto iyo qiimeynta?
Waalidiinta ardayda dhigata iskuullo badan oo aan dawli ahayn ayaa inta badan bixiya inta badan kharashka waxbarashadooda ee ardayga oo ah qaab waxbarid ah oo ah kharash jeebka ka baxa. Sidoo kale, qoysaska iskuulka wax lagu barto waxay guud ahaan daboolaan inta badan ama dhammaan kharashyada ku baxa manhajka, buugaagta, qalabka waxbaridda iyo khibradaha. Qaddar yar oo gargaar lacageed ah ayaa laga heli karaa barnaamijka Aids to Nonpublic Ardayda. Waa inaad buuxisaa waqtiyada kama dambaysta ah ee soo socda haddii aad rabto inaad u-qalanto inaad hesho gargaar:
Marka la gaaro Sebtember 15: Ka codso Foomka Aids-ka ee Ardayda aan Jumhuuriga ahayn degmo dugsiyeedka aad degan tahay.
Marka la gaaro Oktoobar 1: Ku soo celi Foomka Aids-ka ee Ardayda aan Jumlada ahayn degmo dugsiyeedka aad degan tahay.
Marka la gaaro Oktoobar 15: Degmaddaada degmada deggan ayaa foomka u gudbineysa MDE, oo kuu oggolaaneysa inaad ka hesho maaliyad loogu talagalay buugaagta, imtixaannada waxqabadka heer qaran ee heer qaran, iyo qalab shaqsiyadeed ee wax lagu barto oo ku saabsan amaah ahaan.
Tilmaamaha iyo Adeegyada La-talinta ee Ardayda Dugsiga Sare ee Caafimaadka. Si aad ubarato sicirka hadda jira, kafiiri warqadda daabacaadda ardayda aan dawliga ahayn ee ku saabsan sicirka websaydhka MDE.
Ardaydu waa inay ahaadaan 5 jir Sebtember 1 si ay ugu qalmaan wixii gargaar ah. Xannaanada carruurta ee barnaamijyada maalin-barkeed waxay helaan maalgelin nus-maal ah oo la qiimeeyay.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan Gargaarka Ardayda aan Jumhuuriga ahayn, la xiriir MDE School Finance: Greg Sogaard , 651-582-8858.
Ma jiraan wax cashuur dhaaf ah oo loogu talagalay kharashyada la xiriira iskuulka-guriga?
Minnesota waxay siisaa amaah canshuur dakhli doolar ah qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee aqoonta leh, iyo sidoo kale yareynta qiimaha waxbarashada (ka goynta cashuurta) ee qoysas kale oo badan ilaa $ 2650 kharashyada ah. Eeg Xaashida Xaqiiqda Canshuuraha Dakhliga Shakhsiyeed ee Waaxda Dakhliga ee Minnesota oo ku saabsan Kala-goynta Waxbarashada K-12 iyo Kharashaadka iyo U-qalmidda Kharashka-Iskuulka Guriga si aad wax uga ogaato amaahda iyo ka-goynta cashuurta waxbarashada K-12 ee Minnesota si loo go'aamiyo in cashuurta qaarkood ama dakhliga la cashuurayo la dhimi karo.
Intaa waxaa sii dheer, iskuulada guryaha ee Minnesota ayaa laga dhaafi karaa canshuuraha iibka gobolka ee waxyaabaha qaar. Buuxi Waaxda Canshuuraha ee Shahaadada Cafiska . Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan waxyaabaha u qalmi kara ka-dhaafitaanka canshuurta iibka gobolka, la xiriir Waaxda Canshuuraha ee Gobolka Minnesota .
Ardaygeyga-iskuulka-guriga ma ka heli karaa adeegyada iskuulka dadweynaha?
Marka loo eego Xeerarka Minnesota, qaybta 123B.44 , ardayda dugsiga-guriga waxaa lagu siin karaa adeegyo caafimaad, hagitaan iyo la-talin ah oo laga helayo goobta dugsiga dadweynaha, goob dhexdhexaad ah, ama guriga-dugsiga. Degmadda degan iyo wakiillada guriga-dugsiga waa inay qabtaan la-tashi sanadle ah oo ku saabsan nooca, bixiyaha iyo goobta adeegyada. Gudiga maamulka degmada ee degan waa inay gaaraan go'aanka ugu dambeeya goobta lagu bixinayo adeegyada, iyo wakiilka MDE waa inuu u qoondeeyaa degmooyinka iskuulka qiimaha dhabta ah ee adeegyada, oo aan ka badnaan doonin celceliska kharashka arday kasta oo ka tirsan iskuulka dadweynaha.
Ilmahaygu ma ka qaybqaadan karaa waxqabadyada manhajka ka baxsan, oo ay ku jiraan noocyada yar yar iyo ciyaaraha fudud, ee degmada dugsigeenna deggan?
Dugsiyada-guriga iyo dugsiyada kale ee aan dawliga ahayn oo leh shan ama ka yar ardayda ayaa ka qayb-geli kara waxqabadyada manhajka ka baxsan ee degmadooda dugsiga deggan, sida ku cad Xeerarka Minnesota, qaybta 123B.49 . Kaqeybgalka isboortiga tartanka dugsiga sare waxaa nidaaminaya Minnesota League ee Dugsiga Sare , (763) 560-2262. Guddiyada iskuulada dadweynaha waxay ubaahan karaan khidmadaha ardayda si ay ugaqaybqaataan waxqabadyada manhajka kabaxsan marka loo eego Xeerarka Gobolka Minnesota ee 123B.36 .
Ardayda dugsiga-guriga ahi ma heli karaan manfacyada Barnaamijka Nafaqada Dugsiga?
Guud ahaan maya. Ardayda dugsiga-guriga ku nool sida caadiga ah ma heli karaan faa'iidooyinka barnaamijka nafaqada ee dugsiga. Carruurta dugsiga-guriga ku jirta ayaa heli kara fursad haddii ay ka diiwaangashan yihiin degmada oo ay ku qaadanayaan fasalo (ugu yaraan waqti dhiman) iskuul halkaas oo lagu bixiyo barnaamijyada cuntada dugsiga. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Adeegyada Cunnada iyo Nafaqada ee MDE.
Dugsiyada-guryuhu ma bari karaan qaybta fasalka ee waxbarashada darawalnimada?
Waaxda Badbaadada Dadweynaha ee Minnesota waxay leedahay ikhtiyaarro loogu talagalay waxbarashada darawalnimada fasalka oo ay heli karaan oo keliya ardayda dugsiga-guriga ee waqtiga-buuxa ah xaaladaha u horseedi doona diblooma dugsiga sare ee dugsiga-guriga ah, sida ku xusan Xeerarka Minnesota, qaybta 171.05, hoosaadka 2 (1) (ii) .
Canuggayga baahida gaarka ah qaba ma ka heli karaa adeegyada waxbarashada gaarka ah degmo dugsiyeedka aan degganahay?
Degmooyinka iskuulka degani waa inay u oggolaadaan ardayda dugsiga-guriga inay ka helaan adeegyada waxbarashada gaarka ah degmo dugsiyeedka, sida ku xusan Xeerarka Minnesota, qaybta 125A.18 iyo qaybta 126C.19 .
Qiyaasta waqtiga la wadaago ee sharciga gobolku ma ka caawin karaa ardaygayga helitaanka koorsooyinka tacliinta?
Ardayda dugsiga aan dawliga ahayn, oo ay ku jiraan ardayda dugsiga-guriga, iyada oo aan lahayn barnaamijka waxbarashada shaqsiga ah (IEP) waxay codsan karaan waxbarid waqti-wadaag ah oo laga helo iskuullada dadweynaha ee ku yaal Minnesota, laakiin siyaasadda maxalliga ah ayaa go'aamin doonta haddii ikhtiyaarka waqtiga-wadaagga ah uu heli karo ardaygu iyo haddii ay tahay, waxa xaddidnaanta ah yihiin.
Haddii ardaygu aanu deganayn degmada uu ku yaallo dugsiga loogu talo galay oo dugsigaasna uu diyaar u yahay inuu ardayga u qoro arday waqti-wadaag ah, markaa dugsigu wuxuu u baahan yahay inuu la xiriiro degmada deggan si uu uga codsado maalgelinta waqtiga-wadaagga ah. Degmada ay degan tahay waa inay u hogaansanto. Ardaygu waa inuu noqdaa degane Minnesota si uu ugu qalmo inuu soo saaro gargaar waqti wadaag ah.
Hal xadidaad muhiim ah ayaa kajirta heerka gobolka. Sharciga Minnesota uma ogolaanayo ardayda aan dowliga ahayn, oo ay ku jiraan ardayda guriga-iskuulka, inay abuuraan caawinaad waqti wadaag ah oo loogu talagalay kaqeybgalka koorsooyinka barashada tooska ah ee dadweynaha K-12 ee Minnesota, taas oo macnaheedu yahay barnaamijka khadka tooska ah ee iskuulada dadweynaha wuxuu ka qaadi karaa kharashka waxbarashada qoyska.
Ardaygeyga iskuulka dadweynaha ma u isticmaali karaa sharciga waqtiga wadaagga ah mararka qaarkood iskuulka guriga fasal?
Sharciga gobolka-waqtiga-wadaagga looma qorsheynin inuu macne u noqdo ardayda dhigata dugsiyada dadweynaha inay mararka qaarkood qaataan fasal-guri-dugsiyeed ama ikhtiyaarrada kale ee waxbarasho ee gaarka loo leeyahay. Taabadalkeed, ardaydan iskuulada dadweynaha waxay sahmin karaan daraasad madaxbanaan oo ay kormeerayaan macalin shati haysta ama barashada qadka tooska ah ee dadweynaha. Barta looga wada hadlayo kala-doorashooyinkaan loogu talagalay ardayda dhigata dugsiyada dadweynaha waa lataliyayaasha hagidda degmada.
Ardaygeyga-iskuulka guriga ma dhigan karaa iskuul loogu talagalay barashada diinta?
Aan ku xirnayn waqtiga la wadaago, arday kasta oo dhigta dugsiga dadweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu ka maqnaado dugsiga dadweynaha ilaa saddex saacadood asbuucii haddii ay tahay rabitaanka waalidku inuu ilmuhu dhigto dugsi loogu talagalay barashada diinta oo ay wadaan kaniisadaha qaarkood, ama ururka kaniisadaha, ama urur dugsi kasta oo axad ah oo lagu daro sharciyada Minnesota, marka loo eego Qawaaniinta Minnesota, qaybta 120A.22, hoosaadka 12 (a) (3) .
Ardaygayga-iskuulka-guriga ma qaadan karaa fasalo jaamacadeed?
Ardaygaagu wuxuu ku qaadan karaa fasalo dugsiga sare kadib barnaamijyada Diiwaangelinta Dugsiyada Sare (PSEO) haddii ay buuxiyaan shuruudaha loona oggolaado machad ka qayb qaadanaya Minnesota .
Marka loo eego Xeerarka Minnesota, qaybta 124D.09, hoosaadyada 4 , 10aad, 11aad ama 12aad ardayda guriga-iskuulka dhigata waxay codsan karaan inay qaataan fasalo jaamacadeed (khadka tooska ah ama shaqsi ahaan) iyada oo loo marayo PSEO iyaga oo la xiriiraya machad kaqeyb gala oo ku qoran bogga MDE. Ardayda fasalka 10-aad ayaa ku xaddidan inay iska diiwaangeliyaan hal shaqo ama waxbarasho farsamo (CTE) inta lagu guda jiro simistarkooda koowaad ee PSEO. Fasalka 10aad waa inuu helaa buundo ku gudubta fasalka 8-aad ee Qiimaynta Buuxda ee Minnesota, ama qiimeyn kale oo akhris oo ay aqbashay hay'adda diiwaangelinta. Haddii ardaygaaga fasalka 10aad helo darajo "C" ama ka sii fiican koorsada CTE, waxay iska qori karaan koorsooyin dheeraad ah oo CTE ah semesterka soo socda.
Ardayda da'doodu tahay 14- iyo 15 sano ma shaqeyn karaan inta lagu jiro saacadaha iskuulka maalmaha iskuulka?
Aaggan waxaa kormeera Waaxda Shaqada iyo Warshadaha ee Minnesota. Fadlan kala xiriir 651-284-5070 , 1-800-342-5354 ama dli.laborstandards@state.mn.us si aad hagitaan dheeraad ah u hesho.
Ardaygaygu wuxuu ku jiraa dugsiga sare. Ayaa diyaarinaya qoraalka iyo diblooma?
Maadaama aad tahay maamulaha iskuulka guriga, waxaad mas'uul ka tahay inaad xafiddo diiwaanada saxda ah si loo soo saaro qoraal iyo diblooma. Kheyraad badan oo khadka tooska ah iyo daabacan ah ayaa ka caawin kara waalidka iskuulka guriga ku jira inay soo saaraan qoraal sax ah oo xirfad leh. MDE ma cadeyneyso ama ay ansaxineyso dibloomada iskuulada gaarka loo leeyahay ama qoraalka. Sidoo kale, degmo dugsiyeedyada maxalliga ah kama tan u sameeyaan iskuulada-guryaha ama dugsiyada kale ee aan dawliga ahayn.
Ardaygayga ka qalin jabinaya iskuulka ma la socon karaa fasalka dugsiga dadweynaha qalin jabinta?
Maya, ardayda ka qalin-jabisa iskuullada-guryuhu kama qayb galaan adeegyada qalin-jabinta ee dugsiga dadweynaha. In kasta oo xafladaha qalin-jabinta mararka qaarkood lagu sifeeyo waxqabadyo ka baxsan manhajka, haddana ardayda dugsiga-guriga ka-qaybgeli kartaa kama qayb-geli karaan xafladaha qalin-jabinta ee ardayda dhigata dugsiga sare ee dawladda maxaa yeelay kuwani waa xaflado loogu talagalay ardayda si guul leh u soo buuxisay shuruudaha qalin-jabinta oo ka qalin-jabinaya dugsigaas gaarka ah.
MDE ma xaqiijin kartaa ama cadeyn kartaa dibloomada dugsiga-guriga ama qoraalka qoraal ee loo shaqeeyaha, xafiisyada meleteriga ama kuleejka?
MDE ma awoodo inay bixiso wax xaqiijin ah ama shahaado ah wixii diblooma ama iskuul guriga ama iskuulka ah. Ururradu waxay u baahan yihiin inay si toos ah ula shaqeeyaan waalidka ardayga faray.
Sidee bay ardayda dugsiga-guriga ahi u qaadan karaan imtixaannada laga galo kuleejka?
Ardayda wax ku baratay guriga ee raba inay galaan midkood imtixaanka kulleejada 'ACT' ama 'SAT college' waxay inta badan ka heli doonaan xulashooyin badan dugsiyada sare iyo kulliyadaha deegaanka. Si kastaba ha noqotee, imtixaannada ku habboon ee tijaabada ah ayaa laga yaabaa inay ku adkaato helitaankooda. U-doodayaasha wax-barashada guriga waxay kugula talinayaan isticmaalka koodhadhka-iskuulka marka aad imtixaaneyso si dhibcaha laguugu soo diro cinwaanka gurigaaga, iyo maya ilaa dugsiga sare ee aad ku tijaabisay.
Hordhac : haddii aad rabto inaad qaadatid dhaqanka ACT, ka hubi dugsiga sare ee dadweynaha ee deegaankaaga. Qaar ka mid ah ururada iskuulka-guriga ayaa iyaguna bixiya. Summada PreACT ee iskuulada guryaha waa: 979-999.
Qaadashada Sharciga : Xeerka waxaa la bixiyaa afar ilaa lix jeer sanadka oo dhan. Ardayda iskuulka dhigata waxay iska diiwaan gelin karaan goobta imtixaanka ACT waxayna raaci karaan tilmaamaha soo degsashada dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah maalinta imtixaanka. Lambarka dugsiga sare ee iskuulka ee loogu talagalay ACT waa 969-999.
Qaadashada PSAT / NMSQT : Imtixaanka U-Qalmitaanka Shahaadada Horudhaca ah ee SAT / National Merit (PSAT / NMSQT®) waxaa la siiyaa sannad kasta Oktoobar. Waxay cabireysaa isla aqoonta iyo xirfadaha sida SAT waana imtixaanka u qalmida gelitaanka Barnaamijka Abaalmarinta Qaranka ee 'Merit® Scholarship'. Si aad u qaadato PSAT / NMSQT, waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto dugsi sare oo kuu dhow oo imtixaanka maamulaya. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto iyaga dhowr bilood kahor taariikhda imtixaanka. Maaddaama imtixaanka la bixinayo Oktoobar tani macnaheedu waa inaad la xiriirto dugsiga sare ee aad rabto inaad imtixaanka ku gasho dhammaadka Maajo ama horraanta Juun. Dugsiyo badan oo sare ayaan u oggolaan doonin tan sababtoo ah xaddidaadda tirada imtixaannada loo ogol yahay inay dalbadaan. Taariikhaha sanadlaha ah ee PSAT, fadlan booqo SAT Suite of Assessments . Haddii arday doonaya inuu qaato PSAT si uu ugu tartamo National Merit Scholarship ayaa seegay imtixaanka, la xiriir Hay'adda National Merit Scholarship Corporation talaabooyinka xiga. Nambarka PSAT ee deganayaasha Minnesota waa 992449.
Qaadashada SAT : Ardayda guryaha lagu dhigto waxay iska diiwaan gelin karaan SAT khadka tooska ah ama waraaqda, sida ardayda kale. Meelkasta oo lagaa codsado lambarkaaga dugsiga sare foomka diiwaangelinta, isticmaal lambarka 970000.
Layli Bilaash ah oo loogu talagalay SAT iyo PSAT / NMSQT : Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loogu diyaar garoobo SAT ama PSAT / NMSQT waa in loo adeegsado SAT Rasmiga Rasmiga ah Akadamiyada Khan® . Waa bilaash, waa khadka tooska ah, waxayna ku siinaysaa qorshe shaqsiyeed shaqsiyeed oo ku saleysan dhibcahaagii hore ee SAT ama PSAT / NMSQT ama su'aalo gaagaaban oo aad ku qaadatid akadeemiyadda Khan.
Shabakadaha wixii macluumaad dheeri ah waxaa ka mid ah Guddiga Kulliyadda (PSAT, SAT, Accuplacer, CLEP, iyo AP) iyo ACT (Pre-ACT, Aspire, ACT).
E-Library Minnesota waxay ku siisaa marin bilaash ah imtixaannada udiyaar garowga iyadoo loo marayo Maktabadda Waxbaridda ee Express. Maktabadda Waxbarshada Express waxay ku taal geo-ku-yaal si loo xaqiijiyo sidaa darteed kaarka maktabadda looma baahna. Fadlan booqo websaydhka Maktabadda Waxbarshada Express si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ma jiraan wax walaac ah oo ku saabsan asturnaanta xogta aan ka warbixinayo ee ku saabsan diiwaangelinta dugsiga-guriga? Xaaladda aan ku sugan nahay dartiis, ammaan ma ahan in goobtayada ay dadka qaarkii yaqaan.
Dugsiga degmada ee degmadu uma siidayn karo macluumaadkaaga diiwaangelinta guriga iyo dugsiga kuwa weheliya oo aan ka ahayn kuwa militariga qora. Si kastaba ha noqotee, haddii qoyskaagu weli walaac ka qabo, waxaad u baahan kartaa inaad ka baadho barnaamijka Badbaadada Guriga adoo adeegsanaya xafiiska Xoghayaha Gobolka ee Minnesota. Barnaamijka Badbaadada Guriga ayaa ku meelayn doona sanduuq boosto cinwaankaaga waxayna ku siin doontaa adeegyo gudbinta boostada. Sanduuqa boostadan waxaa loo isticmaali karaa cinwaankaaga sharciga ah.
Haddii ilmahaygu dhowaan ahaa arday dhigta dugsiga dadweynaha ee degmada diiwaangelinta furan ama iskuul charter ah, miyey beddelaysaa meesha aan iska diiwaangeliyo ama ilmahaygu xaq ugu leeyahay inuu ka qaybqaato waxqabadyada manhajka ka baxsan
Mar alla markii aad bilowdo iskuulka-guriga, diiwaangelinta furan ama isqorista dugsiga charter-ka ayaa dhammaatay. Mas'uuliyadahaaga diiwaangelinta iyo xaqa aad uga qaybqaadan karto waxqabadyada manhajka ka baxsan waxay u taal degmada dugsiga aad deggan tahay, xitaa haddii ilmahaaga horay loogu qoray meelo kale.
Weli waxaan qabaa su'aalo ku saabsan iskuulka-guriga ee Minnesota. Ayaa ku caawin kara?
La xiriir xiriiriyaha iskuulka-guriga ee xafiiska kormeeraha dugsiga degmada aad degan tahay si aad u hesho macluumaad ku saabsan diiwaangelinta guriga iyo dugsiga. Haddii aadan aqoon meesha ay tani ku taal, adeegso tan raadiyaha degmada dugsiga.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan sharciga iyo nidaamka dugsiga-guriga, la xiriir MDE Ombudsperson, Cindy Jackson, (651) 582-8572 ama booqo Xafiiska Dib-u-habeynta Xeerarka oo aad dib ugu eegto qawaaniinta mowduuc: Dugsiyada Guryaha.
Tixgeli inaad ku biirto iskaashatada guri-iskuul iyo / ama hay'ad gobolka oo dhan ah si aad ula kulanto qoysaska kale ee guriga-iskuulka u hela una helaan macluumaadka ugu dambeeyay. Shirka guriga-iskuulka waa qaab kale oo lagu sameeyo isku xirnaan, ka qaybgal aqoon isweydaarsiyo, iyo dib u eegista manhajka. Waqtigaan la joogo waxaa jira seddex shirar oo ku saabsan guriga-iskuulka oo sanadkiiba mar lagu qabto gobolka Minnesota. Fadlan booqo shabakadaha ururada waxbarashada guriga ee hoos ku taxan wixii faahfaahin dheeraad ah:
Ururka Macallimiinta Guryaha Masiixiyiinta ee Minnesota (MACHE)
Waxbarashada Guriga ee Kaatooliga ee Minnesota
Isbahaysiga Guriyeynta Dugsiyada ee Minnesota
Macluumaadkan u arag PDF ahaan